२०७८ मङ्सिर ७ मंगलबार ०९:०४:००
दाङ प्रहरीले बाघको छालासहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द रिजालका अनुसार बाघको टाउकोदेखी पुच्छरसम्मको ८ फिट २ इन्च लम्बाई र १ फिट ८ इन्च चौडाई भएको छालासहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउ पर्नेमा राजपुर गाउँपालिका वडा नं. ६ निवासी ३८ वर्षीय सुर्यबहादुर चौधरी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ निवासी ३१ वर्षीय महेन्द्र खड्का रहेका छन् । आइतबार राति ७ बजेतिर पक्राउ गरिएको भएपनि सोमबार मात्रै उनीहरुलाई विज्ञप्ति मार्फत प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ ।
उनीहरुलाई घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ गरुवा चोकबाट पक्राउ गरिएको हो । चौधरीले चलाएर पूर्वबाट पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको रा ३ प २६६ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार रही बाघको छाला ओसारीरहेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो ।